ကိုယျ့ကိုကိုယျတနျဖိုးထားတတျပါစေ - Tameelay
ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလောကျထိခဈြနပေါစေ သူ့ဘကျက အလေးမထားရငျ သူ့ကိုခဈြတာထကျ ကိုယျ့ကိုကိုယျ နှဈနတောပါ။ ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလောကျထိပေးဆပျနပေါစေ သူ့ဘကျက ပွနျရတာဥပက်ေခာတှသောဆိုရငျ ကိုယျ့အခဈြက” ဝဋျ”တဈခုလိုပဲဆိုတာ။
ကိုယျ့ဘကျက ယုံကွညျမှုတှပေေးထားရကျနဲ့ သူ့ဘကျက ယုံကွညျမှုကိုအလှဲသုံးစားလုပျတဲ့အခါ အခဈြဆိုတာ ယုံကွညျမှုမရှိရငျ တညျဆောကျမရနိုငျဘူးဆိုတာ သိလိုကျပါ။ ကိုယျ့ဘကျက ပြျောရှငျမှုတှပေေးပါရကျနဲ့ သူ့ဘကျက အကွိမျကွိမျမကျြရညျကအြောငျ နာကငျြစခေဲ့ရငျ အခဈြကဝမျးနညျးခွငျးမဟုတျဘူး ဆိုတာသိလိုကျပါ။ တခြို့ကပွောကွတယျ ခဈြတတျရငျ ငိုတတျအောငျသငျထားပွီးပွီလားတဲ့? တကယျတမျးတော့ တကယျခဈြတတျတဲ့သူဆိုတာ သူတနျဖိုးထားတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ဘယျတော့မှ မကျြရညျကအြောငျမလုပျဘူး အမွဲပြျောရှငျအောငျထားတတျကွတယျ။
အခဈြဆိုတာ ရယူခွငျးလညျးမဟုတျသလို ပိုငျဆိုငျခွငျးလညျးမဟုတျပါဘူး တဈဦးနဲ့တဈဦး အပွနျအလှနျနားလညျမှု့ရှိနမှေသာလြှငျ အခဈြစဈတဈခုပါ။ တဈယောကျတညျးကပဲ ခဈြနေ၊နားလညျမှု့ပေးနေ၊ သညျးခံခှငျ့လှတျနသေမြှတော့ အခဈြစဈလို့မချေါထိုကျတော့ဘူး” ဝဋျ”တဈခုလိုပဲဆိုတာ အခြိနျမလှနျခငျ သိပွီး ဆငျခငျြတကျပါစေ။ လေးစားစှာဖွငျ့ ♥♥♥ ကွိုးစားပါအုံးမညျ ~~~
ကိုယ့်​ဘက်​က ဘယ်​​လောက်​ထိချစ်​​နေပါ​စေ သူ့ဘက်​က အ​လေးမထားရင်​ သူ့ကိုချစ်​တာထက်​ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ နှစ်​​နေတာပါ။ ကိုယ့်​ဘက်​က ဘယ်​​လောက်​ထိ​ပေးဆပ်​​နေပါ​စေ သူ့ဘက်​က ပြန်​ရတာဥ​ပေက္ခာ​တွေသာဆိုရင်​ ကိုယ့်​အချစ်​က” ဝဋ်​”တစ်​ခုလိုပဲဆိုတာ။
ကိုယ့်​ဘက်​က ယုံကြည်​မှု​တွေ​ပေးထားရက်​နဲ့ သူ့ဘက်​က ယုံကြည်​မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်​တဲ့အခါ အချစ်​ဆိုတာ ယုံကြည်​မှုမရှိရင်​ တည်​​ဆောက်​မရနိုင်​ဘူးဆိုတာ သိလိုက်​ပါ။ ကိုယ့်​ဘက်​က ​ပျော်​ရွှင်​မှု​တွေ​ပေးပါရက်​နဲ့ သူ့ဘက်​က အကြိမ်​ကြိမ်​မျက်​ရည်​ကျ​အောင်​ နာကျင်​​စေခဲ့ရင်​ အချစ်​ကဝမ်းနည်းခြင်းမဟုတ်​ဘူး ဆိုတာသိလိုက်​ပါ။ တချို့က​ပြောကြတယ်​ ချစ်​တတ်​ရင်​ ငိုတတ်​​အောင်​သင်​ထားပြီးပြီလားတဲ့? တကယ်​တမ်း​တော့ တကယ်​ချစ်​တတ်​တဲ့သူဆိုတာ သူတန်​ဖိုးထားတဲ့ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ကို ဘယ်​​တော့မှ မျက်​ရည်​ကျ​အောင်​မလုပ်​ဘူး အမြဲ​ပျော်​ရွှင်​​အောင်​ထားတတ်​ကြတယ်​။
အချစ်​ဆိုတာ ရယူခြင်းလည်းမဟုတ်​သလို ပိုင်​ဆိုင်​ခြင်းလည်းမဟုတ်​ပါဘူး တစ်​ဦးနဲ့တစ်​ဦး အပြန်​အလှန်​နားလည်​မှု့ရှိ​နေမှသာလျှင်​ အချစ်​စစ်​တစ်​ခုပါ။ တစ်​​ယောက်​တည်းကပဲ ချစ်​​နေ၊နားလည်​မှု့​ပေး​နေ၊ သည်းခံခွင့်​လွှတ်​​နေသမျှ​တော့ အချစ်​စစ်​လို့မ​ခေါ်ထိုက်​​တော့ဘူး” ဝဋ်​”တစ်​ခုလိုပဲဆိုတာ အချိန်​မလွန်​ခင်​ သိပြီး ဆင်​ချင်​တက်​ပါ​စေ။ ​လေးစားစွာဖြင့်​ ♥♥♥ ကြိုးစားပါအုံးမည်​ ~~~
Categories Tameelay Knowledge Tags 15 Post navigation
” ဘုရား ဂုဏျတျော မြားမြားပှားပါ ”